Sei Kuzivisa iOS 9 Veruzhinji Beta Bugs | IPhone nhau
Maitiro ekuzivisa iOS 9 yeruzhinji beta bugs
Zvino sezvo yekutanga yeruzhinji beta yeIOS 9 iripo, isu tese tinogona kubatsira kuvandudza hurongwa. Avo vedu vane beta yevagadziri yakaiswa (yatingave isu sevagadziri kana kwete) hatina mukana wekuita kudaro kuburikidza ne "Mhinduro" application iyo inosanganisirwa yeruzhinji vhezheni yeIOS 9. Tine webhusaiti ku zivisa nezve mabugs, asi a dandemutande iri haigone kuwanikwa pasina akaundi account.
Vasiri-vagadziri zvakare vane yeruzhinji beta yakaiswa vanozove neMhinduro yekushandisa, iyo iwe yaunogona kushandisa kuzadza mimwe minda uye taura bug yawakaona kuApple. Izvi zvakakosha nekuti nekuzivisa mabugs tichaita kuti Apple izive matambudziko nekukurumidza uye, nekufamba kwenguva, iyo system iri nani.
Isu tinovhura iko kunyorera Feedback.
Takatamba pa kubvuma (gamuchira).
Isu tinosuma email yeedu Apple ID uye password.
Takatamba pa Ridza (nyora) kumusoro kurudyi (kana Nyowani Mhinduro pasi).
Isu tinozadza iyo zita rinotsanangura uye zadza zvikamu zvese.
Takatamba pa tuma (Tumira) kutumira chirevo kuna Apple.
Tinogona kutumira makomendi pamwe neshumo yekumwe kudzima kusingatarisirwi uko kuchavepo kusarudza mukati mekushandisa. Kana iwe uchifanirwa kutumira mushumo, zvakanakisa kuti iwe uzviite nekukurumidza mushure mekundikana kwaitika kana kuti haugone kuziva kuti ndeapi eese marepoti aunofanira kutumira.
Iwe unofanirwa kugara uchifunga izvozvo Mumishumo, yako data yedhata senzvimbo, email, makarenda uye zita zvinogona kutumirwa kuApple. Naizvozvo, iwe unongofanirwa kutumira aya marudzi emishumo kana iwe usina hanya nekupa urwu rudzi rweruzivo. Hapana data richapihwa kubva kune yako iCloud keychain kana chero chinhu chisina kukosha kugadzirisa kukundikana iwe kwawataura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuzivisa iOS 9 yeruzhinji beta bugs
«Uri pane ino webhusaiti»
Zvakadii nezvePablo, ndinoshamisika kuti ndeipi beta yakagadzikana, pakati peiyo 9 beta 3 yevagadziri kana yeruzhinji beta 1? Zvido.
Mhoroi, Derisnel. Vanofanira kunge vakafanana. Muchokwadi, mune yekuvandudza vhezheni zvinhu senge iyo keyboard trackpad yanyangarika uye ini ndinofunga ndezvekuti vasiri-vanogadzira havana matambudziko nazvo (kunyangwe isina kuvapa). Ivo vane akasiyana kuvaka, asi izvi zvinogona kuve nekuti vasiri-vagadziri vane iyo application yekutumira mishumo uye yekuvandudza network haina.
Pablo, ndine beta 3 pane yangu iPhone 6 uye pane yangu iPad Air 1 uye ndiyo yevagadziri uye kwete yeruzhinji, iyo trackpad haishande pane iyo iPhone asi iyo iPad Mhepo inoshanda, handizive kuti nei. ..
Mhoro Rafael. Izvo zvakabviswa mune iyi vhezheni. Ini ndinofunga imhaka yekuti ikozvino vanhu vazhinji varikuishandisa uye havadi kuisa panjodzi yekundikana.
Teerera kuimba rwiyo rwezhizha 2015 mahara pane yako iPhone neApple Music
WAQuickReply inogonesa kupindura nekukurumidza paWhatsApp